Sazy sy sazy ho an'ny fisotroana sy fiara any UAE | Lalàna momba ny fisotroana sy fiara UAE
Sazy sy sazy ho an'ny fisotroana sy fiara any UAE
Lalàna momba ny fisotroana sy ny fiara UAE
Na dia mahasarika sazy henjana aza ny fiara mamo na aiza na aiza, ny lalàna momba ny fiara mamo, anisan'izany ny sazy, dia miovaova arakaraka ny firenena. Na dia manana politika tsy misy fandeferana aza ny Emira Arabo Mitambatra (UAE) momba ny fitondrana fiara mamo, mpitsidika maro, anisan'izany ireo mpiasa any ivelany, no tsy mahalala ny lalàna mifehy ny fiara mamo ao amin'ny firenena.
Ho an'ny mpitsidika sasany, lasa nofy ratsy haingana ny fanintonana an'i Dubai sy Emirà Arabo Mitambatra rehefa nosamborina noho ny fisotroana sy ny fitondrana fiara. Ny fandikan-dalàna mamo amin'ny fiara ao Emirà Arabo Mitambatra dia mety hisy fiantraikany ratsy, ao anatin'izany ny fanagadrana, ny lamandy be, ny fampiatoana ny fahazoan-dàlana mitondra fiara, ary ny fisamborana ny fiaranao. Na mponina ianao na mpitsidika, dia misy antony maro tsy tokony hisotroanao sy tsy hitondranao fiara any UAE.
Lalàn'ny Emirà Arabo Mitambatra momba ny fisotroana sy ny fitondrana fiara
Na dia tsy heloka bevava aza ny fisotroana toaka ao Emirà Arabo Mitambatra, ny firenena dia manana lalàna hentitra momba ny fisotroana amin'ny ankapobeny, indrindra fa ny fitondrana fiara mamo. Tsy ara-dalàna, ohatra, ny fisotroana ampahibemaso, anisan’izany ny eny an-dalana na tsy misy fahazoan-dalana. Tokony ho 21 taona fara-fahakeliny ihany koa ianao mba hisotro toaka any UAE.
Amin'ny maha mpizahatany anao na mpila ravinahitra dia mbola mila fahazoan-dàlana hisotro toaka ianao, na dia any amin'ny toerana toy ny hotely sy klioba tsy miankina aza. Fanampin'izany, tsy tokony hividy afa-tsy toaka amin'ny fivarotana zava-pisotro misy alikaola ianao. Amin'ny ankapobeny, ny lalàna henjana momba ny fisotroana ao Emirà Arabo Mitambatra dia natao hanakanana ny fitondrana fiara mamo.
Miaraka amin'ny mpamily mamo mahatonga ny 14% amin'ny lozam-pifamoivoizana rehetra any Emirà Arabo Mitambatra, manana lalàna mifehy ny fifamoivoizana ny firenena. Miaraka amin'ireo mpamily mamo manohintohina ny fiarovana azy ireo sy ireo mpampiasa lalana hafa, ny lalàna henjana, anisan'izany ny sazy henjana, dia manampy amin'ny fampitsaharana ny fahazarana manimba. Araka ny Lalàna Federalin'ny Emirà Arabo Mitambatra No. 21 tamin'ny 1995, heloka bevava azo saziana ny mitondra fiara mamo.
Araka izany, ny lalàna dia mitaky ny olona tsy hitondra fiara rehefa mamo na eo ambanin'ny herin'ny alikaola na zava-mahadomelina hafa. Tokony hifady ny hitondra fiara ilay olona, ​​na ara-dalàna na tsy ara-dalàna ilay zavatra nohanina. Fanampin'izany, manitsy tsy tapaka ny lalànan'ny fifamoivoizana i UAE mba hampihenana ny loza ateraky ny fifamoivoizana amin'ny lalany.
Sazy ho an'ny Mamo mitondra fiara any UAE
Araka ny Andininy faha-49 amin'ny lalànan'ny fifamoivoizana UAE, ny mpamono olona misotro toaka sy mitondra fiara dia iharan'ny:
fanagadrana, ary na
lamandy tsy latsaky ny Dh25,000
Azon'ny polisy atao ihany koa ny misambotra mpamily araka ny andininy faha-59.3 amin'ny lalànan'ny fifamoivoizana raha miahiahy na mahita fa meloka ny mpamily:
mahafaty na mandratra olona vokatry ny fitondrana mamo
mitondra fiara tsy mitandrina
fahaverezan'ny fifehezana fiara vokatry ny fitondrana fiara eo ambanin'ny herin'ny alikaola na zava-mahadomelina hafa
Fanampin'izay, azon'ny fitsarana atao ihany koa ny mampiato ny fahazoan-dalana mamily fiara mpitatitra olona mamo mandritra ny telo volana ka hatramin'ny roa taona, arakaraka ny hamafin'ny fandikan-dalàna. Araka ny Andininy faha-58.1 amin'ny Lalàna mifehy ny fifamoivoizana, ny fitsarana dia afaka mandà ny hahazoan'ny olona fahazoan-dàlana vaovao na dia efa tapitra aza ilay nahantona.
Na dia eo aza ny sazy henjana sy ny fampielezan-kevitra mitohy, maro ny olona ao Emirà Arabo Mitambatra, indrindra fa ireo tsy teratany, mbola misotro sy mitondra fiara. Na izany aza, mahasoa anao ny tsy mitondra fiara rehefa mamo. Ankoatra ireo loza miharihary, dia manasazy mafy ireo mamo tsy mitondra fiara ny UAE. Mampidi-doza ihany koa ny hahatonga ny UAE ho mafy be ianao satria mety ho very ny tombontsoanao amin'ny fiara rehefa voaheloka ho mamo.
Tahaka ny olona maro monina ao UAE, mety nifindra tany amin'ny firenena ianao noho ny fandraharahana sy asa tsara. Ny toetr'andro mafana ao amin'ny firenena sy ny fari-piainan'ny olona hafa angamba no nahasarika azy. Na izany aza, ny faharesen-dahatra mitondra fiara mamo dia mety hampidi-doza ny nofinofinao ary hanova ny fijanonanao ho nofy ratsy. Misy voka-dratsy lehibe amin'ny fiara mamo any UAE.
Ankoatra ny lamandy sy ny fanagadrana, mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny fiainanao, anisan'izany ny asa fandraharahana, ny fampiatoana ny fahazoan-dalana mitondra fiara na ny fisamborana fiara. Mety ho very asa amin'izao fotoana izao koa ianao. Na mpiasa mpila ravinahitra na mponina, ny faharesen-dahatra mitondra fiara mamo ihany koa dia mampihena ny asanao. Ohatra, mety ho sarotra ny mahazo asa amin'ny indostria sasany, anisan'izany ny indostrian'ny fandraisana vahiny.
Araka izany, tokony handinika ny manakarama taxi ianao na manana mpamily voatendry isaky ny mivoaka hisotro miaraka amin'ny namanao na havanao. Raha tsy izany, dia tokony handinika ny fisotroana any amin'ny toeram-ponenana ianao, anisan'izany ny tranonao, izay tsy mila mitondra fiara aorian'ny fisotroana alina. Azonao atao ihany koa ny mihevitra ny hamerana ny fisotroanao na ny fampitsaharanao ny fisotroana tanteraka. Amin'ny ankapobeny, ny alin'ny fisotroana sy ny fiara dia tsy tokony hampidi-doza ny nofinofinao UAE, indrindra amin'ny maha-mpitantany anao, mpiasa any ivelany, na mpandraharaha.
Manakarama mpanolotsaina ara-dalàna ao Dubai anio!
Ny mitondra fiara eo ambanin'ny herin'ny alikaola na zava-mahadomelina dia iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny lozam-pifamoivoizana any UAE. DUI (Driving Under the Influence) sy DWI (Driving While Intoxicated) dia fiampangana mahazatra, indrindra any UAE. Manam-pahaizana manokana amin'ny fikarakarana trangan'ny fiara mamo, ny fandehanana mafy ary ny karazana fandikan-dalàna hafa. Ny sazy amin'ny fanitsakitsahana ny lalàn'i Emirà Arabo Mitambatra mifehy ny fisotroana toaka sy ny familiana fiara dia mety henjana ary mety hisy fiantraikany amin'ny lazanao, ny asanao, ary ny fianakavianao mihitsy aza.
Ao amin'ny Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants, dia manampy ireo olona voampanga ho nitondra fiara teo ambany fitarihan'ny alikaola izahay.. Manome fanampiana ara-dalàna ho an'ny raharaha DUI sy DWI any Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, ary manerana ny Emirà Arabo Mitambatra. Izahay dia iray amin'ireo orinasa mpanolotsaina ara-dalàna tsara indrindra any Dubai manome toro-hevitra ara-dalàna ho an'ny raharaham-barotra, fianakaviana, trano ary raharaha momba ny fitsarana. Mifandraisa aminay anio!